ဝကျဝံအရှယျအစား ဧရာမကွှကျကွီးတဈကောငျကို မက်ကဆီကိုမှာတှရှေိ့ခဲ့ – A Phaw Mon
ထူးဆန်းထွေလာ / နိုင်ငံတကာသတင်း
မက်ကဆီကိုနိုငျငံ၊ မက်ကဆီကိုစီးတီးက ရပျကှကျတဈခုမှာ ဧရာမကွှကျကွီးတဈကောငျကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့လို့ လူမှုကှနျရကျမှာ အကယျြအကယျြ ငွငျးခုနျဖှယျ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီသတငျးကို နာမညျကွီးသတငျးမီဒီယာတှမှောလညျး ဖျောပွထားတာမို့ ဟုတျမှနျတဲ့သတငျးတဈပုဒျ ဖွဈနိုငျတယျလို့ မှတျခကျြခသြူတှလေညျး မွောကျမြားစှာ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ရဆေိုးမွောငျးတဈခုထဲကနေ တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ကွှကျကွီးတဈကောငျဟာ အရှယျရောကျပွီး ဝကျဝံတဈကောငျရဲ့အရှယျအစားမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဓာတျပုံတှအေရတော့ ကွှကျကွီးရဲ့အရှယျအစားဟာ ဝကျဝံကွီးတဈကောငျ ငုတျတုပျထိုငျနသေညျ့အလား ထငျမှတျရပါတယျ။ မွူနီစီပယျလုပျသားတှဟော ရမွေောငျးကို ဖုံးနတေဲ့ အမှိုကျပုံကွီးကို ရှငျးလငျးရာမှာ ဒီကွှကျကွီးကို တှခေဲ့ရတာပါတဲ့။
အမှိုကျပုံကွီးဟာ စညျးကမျးမဲ့စှနျ့ပဈထားတဲ့ အမှိုကျပုံဖွဈပွီး၊ တနျခြိနျအားဖွငျ့ (၂၂)တနျအထိ ရှိကွောငျး သိရပါတယျ။ ဒီအမှိုကျပုံကွီးကွောငျ့ မိုးမြားခြိနျမှာ ရပေိတျစို့မှုတှေ ဖွဈခဲ့လို့ ကွိုးစားပမျးစား ဖယျရှားခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီမှာ ကွှကျတှရေဲ့အသိုကျနရောလို့ ဖွဈနခေဲ့ပွီး၊ ဒီအထဲမှာ ကမ်ဘာမှာအကွီးဆုံးလို့တောငျ ပွောလို့ရတဲ့ ကွှကျကွီးကို တှရှေိ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွှကျကွီးက တကယျ့သကျရှိအစဈလား ….???
နောကျပိုငျး ထှကျပျေါလာတဲ့ သတငျးတှမှောတော့ ကွှကျကွီးတှရှေိ့တယျဆိုတာ အမှနျဖွဈကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ တကယျ့သကျရှိ ကွှကျမဟုတျဘဲ ဟောလိုဝငျးအထိမျးအမှတျ ထုတျလုပျထားတဲ့ ဧရာမအရှယျအစား အရုပျကွှကျကွီးဖွဈကွောငျး ဆိုပါတယျ။ အဆိုပါ ကွှကျရုပျကွီးရဲ့ တကယျ့ပိုငျရှငျအစဈမှာ Evelin López လို့ သိရပွီး၊ ဒီကွှကျရုပျကို သူမကိုယျတိုငျ စိတျတိုငျးကြ ဝယျယူထားတာပါတဲ့။
လှနျခဲ့တဲ့ တဈနှဈလောကျကတညျးက မိုးသညျးထနျစှာ ရှာခြိနျမှာ ရဆေိုးမွောငျးကနေ ဒီအရုပျကွီး မြောပါသှားတဲ့အတှကျ စုပျစမွုပျစ ပြောကျသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လူမှုကှနျရကျမှာတော့ သတငျးအမှနျ မထှကျပျေါသေးခငျအခြိနျထိ ကွှကျအတုလား အစဈလား အငွငျးပှားလို့ ကောငျးတဲ့သတငျးတဈပုဒျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Ref ; nydailynews
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ မက္ကဆီကိုစီးတီးက ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ဧရာမကြွက်ကြီးတစ်ကောင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ အကျယ်အကျယ် ငြင်းခုန်ဖွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို နာမည်ကြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်း ဖော်ပြထားတာမို့ ဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချသူတွေလည်း မြောက်များစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရေဆိုးမြောင်းတစ်ခုထဲကနေ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကြွက်ကြီးတစ်ကောင်ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီး ဝက်ဝံတစ်ကောင်ရဲ့အရွယ်အစားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအရတော့ ကြွက်ကြီးရဲ့အရွယ်အစားဟာ ဝက်ဝံကြီးတစ်ကောင် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေသည့်အလား ထင်မှတ်ရပါတယ်။ မြူနီစီပယ်လုပ်သားတွေဟာ ရေမြောင်းကို ဖုံးနေတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးကို ရှင်းလင်းရာမှာ ဒီကြွက်ကြီးကို တွေ့ခဲ့ရတာပါတဲ့။
အမှိုက်ပုံကြီးဟာ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အမှိုက်ပုံဖြစ်ပြီး၊ တန်ချိန်အားဖြင့် (၂၂)တန်အထိ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအမှိုက်ပုံကြီးကြောင့် မိုးများချိန်မှာ ရေပိတ်စို့မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့လို့ ကြိုးစားပမ်းစား ဖယ်ရှားခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီမှာ ကြွက်တွေရဲ့အသိုက်နေရာလို့ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး၊ ဒီအထဲမှာ ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးလို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ ကြွက်ကြီးကို တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြွက်ကြီးက တကယ့်သက်ရှိအစစ်လား ….???
နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေမှာတော့ ကြွက်ကြီးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် တကယ့်သက်ရှိ ကြွက်မဟုတ်ဘဲ ဟောလိုဝင်းအထိမ်းအမှတ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဧရာမအရွယ်အစား အရုပ်ကြွက်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ ကြွက်ရုပ်ကြီးရဲ့ တကယ့်ပိုင်ရှင်အစစ်မှာ Evelin López လို့ သိရပြီး၊ ဒီကြွက်ရုပ်ကို သူမကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူထားတာပါတဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက မိုးသည်းထန်စွာ ရွာချိန်မှာ ရေဆိုးမြောင်းကနေ ဒီအရုပ်ကြီး မျောပါသွားတဲ့အတွက် စုပ်စမြုပ်စ ပျောက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ သတင်းအမှန် မထွက်ပေါ်သေးခင်အချိန်ထိ ကြွက်အတုလား အစစ်လား အငြင်းပွားလို့ ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။